Zvikonzero zvisere zvekuda iyo nyowani iPhone 8 | IPhone nhau
Zvikonzero zvisere zvekuda iyo nyowani iPhone 8
Karim Hmeidan | | iPhone 8, Noticias
Nezuro takakuudza takafara sei neiyo nyowani iPhone 8 Plus, chishandiso chitsva kubva kune vakomana pabhokisi chinouya kuzotsiva yapfuura renji ye iPhone 7. Vazhinji vachati kuenderera kwegadziriro chikanganiso chakazara, asi isu takuudza kare izvozvo unofanira kuva nazvo mumaoko ako kuti uone kuti kunyangwe iri saizi yakafanana neiyo yapfuura modhi, dhizaini inochinja.
Uye zviripachena, kwete zvese zvigadzirwa, isu tinofanirwa zvakare kufunga nezvazvo Apple yakagadzirisa zvachose Hardware yeiyo iPhone 8 uye iPhone 8 Plus. Apple haidi kuti titarise chete paiyo itsva iPhone X, ivo vanoda kuti isu tione zvese zvakanaka nezve iyo nyowani iPhone 8 uye iPhone 8 Plus, kune izvi ivo vachangobva kuvhura nzvimbo nyowani vachitipa zvisere zvikonzero zvekuda (kana kuda) iyo itsva iPhone 8… Mushure mekusvetuka tinokuratidza iyo vhidhiyo uye isu tinokuudza iwe izvi zvisere zvikonzero zvekuona kana iwe uchida iyi nyowani iPhone 8 kana kwete.
1 1. Girazi rakasimba kwazvo rakamboshandiswa mu smartphone
2 2. Portrait mwenje
3 3. Wireless kuchaja
4 4. Iyo ine simba kwazvo uye yakangwara processor mu smartphone
5 5. Kamera inozivikanwa pasi rese yakagadziridzwa
6 6. Kuramba kwemvura
7 7. New Retina HD kuratidza
8 8.Augmented Reality ikozvino chave chokwadi
1. Girazi rakasimba kwazvo rakamboshandiswa mu smartphone
Chikonzero chekutanga chekuda iyo nyowani iPhone 8. ndizvo chaizvo iyo design. Ok, isu tine zvishandiso zvine micheto zvakare uye ikozvino zvinopesana zvine fashoni, asi chokwadi ndechekuti girazi rekuseri chivharo rinopa iro kutaridzika kwakanaka. Uye kwete, usatya hunyengeri hwegirazi, Apple yakagadzira pamwe chete naCorning girazi risingapikisi girazi, risinganyanyo shanda rakamboshandiswa mu smartphone.
2. Portrait mwenje
La mobile kutora mifananidzo kunoenda nhanho imwe mberi nemamiriro matsva Portrait Chiedza. Kana nekuburitswa kweiyo iPhone 7 isu tese takashamisika neiyo portrait modhi, iyo Portrait Mwenje inounza kwatiri kuvandudzwa. Vhenekera kumeso kwatino fotora sekunge tiri mu studio yekutora mifananidzo, zviri pachena kuchengetedza daro. Iyo nyowani yekuvhenekesa mwenje modhi iri mubeta uye inovavarira kumusoro.
3. Wireless kuchaja
Kanganwa nezve tambo kana uchiraja yako iPhone, isina waya kuchaja kuri kugara. Kune akawanda ndiro dzisina waya yatinayo mumusika inoenderana, uye Apple ichatangisa kutanga kwayo gore rinouya. Iyo girazi rekuseri chivharo rinotendera iyi nyowani isina waya kuchaja inokwanisa kuchaja bhatiri reedu nyowani iPhone 8 pa 50% mumaminetsi makumi matatu chete.
4. Iyo ine simba kwazvo uye yakangwara processor mu smartphone
Iyo processor nyowani A11 Bionic iri kutyora zvinyorwa, 4.300 bhiriyoni transistors uye matanhatu cores. Apple yakasimba kwazvo uye yakangwara processor iyo inokwanisa kuve kusvika kune 25% nekukurumidza paCPU, uye 30% nekukurumidza paGPU uchienzaniswa nemhando dzekare. Yako iPhone ichaita chaizvo kubhururuka.
5. Kamera inozivikanwa pasi rese yakagadziridzwa
Iyo nyowani Portrait Lighting modhi haisi yega yega nyowani ficha yeiyo iPhone 8 kamera. makamera anovandudzwa new akajeka maseru, mukuwedzera Apple yakaisa ISP processor yakanangana nekuvandudza pikisi kutora yedu yekutora mifananidzo. Ruvara gamut kuvandudzwa, Ultra-inokurumidza kutarisa ... Hongu, kamera yakagadziridzwa.
6. Kuramba kwemvura
Kunge iyo iPhone 7, iyo iPhone 8 haina mvura zvakare. Iyo ine kuramba kumwechete neyeiyo yapfuura modhi, IP67, iyo inoreva kushorwa kune splashes, asi yakaratidzirwa kuve inopokana zvakanyanya. Ehezve, usazviedza zvakanyanya kana ...
7. New Retina HD kuratidza
Iyo nyowani Retina HD skrini iyo inokwanisa kutiratidza yakakura yakafara color gamut kupfuura mune apfuura mamodheru. Ivo vanotitaurirawo kuti iyo skrini Tone True, ndiko kuti, ikozvino tembiricha tembiricha inoenderana kune yakajeka mamiriro akatikomberedza; uye inovandudza kuona kona, tinogona kutarisa iPhone yedu kubva chero chinzvimbo.
8.Augmented Reality ikozvino chave chokwadi
Ehe, iyo Kuwedzera Kwechokwadi anga anesu kwenguva yakareba asi Apple yakavandudza iyo kusvika kumazinga asingadzoreki. Iwo makamera eiyo nyowani iPhone 8 ane mhinduro huru mukutora mufananidzo, uye izvi zvinoita Kuwedzera Kwechokwadi kuve kwechokwadi kuwedzerwa kwechokwadi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 8 » Zvikonzero zvisere zvekuda iyo nyowani iPhone 8
Kana uine modhi yakaderera pane nhanhatu zvakakodzera, dai zvisiri ndaizoenda ndakananga ku iPhone x kana zvandaitarisira gore rinouya.Kuva nema6 kana 6 hakusi kupusa kuenda ku7, nhau dzavanounza hadzipembedze iyo kubviswa kwemari.
Zvakanaka, ndine ma6 uye kana ndikachinja kuita 8 yaizove Plus, zvikasadaro ndinewe. Kwaziso.
Zvizere unobvumirana. Ndine iPhone 6 Plus yakagadziridzwa kuIOS 11, zvakanaka asi inoshandisa bhatiri rakawanda. Pave nemakore gumi nePhones uye ini ndinopasa iyo iPhone 8 (iri rehash). Kunyangwe zvichidhura mari yakawanda, ini handisi kuzozvibvisira ini chido chekutenga iyo iPhone X. Kana ndiine mukana uye ndinogona kutenga kubva kuApple On line, kwemwedzi gumi nemaviri pasina mubereko. Ini ndatozviita ne iMac yangu 27 uye handina kana chekuzvidemba.
Ini handidi kudzokorora zvakafanana dhizaini neiyo iPhone 8, anga ave makore matatu nayo.
Ndiri kuda iyo iPhone X kana ndiri kuzoshandisa mari. Kwaziso.
1 chikonzero chekusatenga kubva kwauri. inokosha 1000 euros, inoenderera modhi uye zvimwe zvakafanana.
Zve iphone X kana ndichifunga kuti zvakakosha, zvinotaridzika zvakanaka.
Toni Cortés akadaro
Ndakagadzirisa angu matanhatu kuIOS 6 uye zviri kufamba mushe. Ini ndinomirira rinotevera rinokosha, uye kana iyo XI yabuda ini ndichatsvaga X mune wallapop….
Pindura Toni Cortés
Ndakamirira xxx kuti ndione bhaisikopo riri nani
Pindura kuna Costoya
varombo vemari. uropi hwako
Pindura kune uff
Ini ndinonyatsoda mavanogara vachitaura kuti inokurumidza sei iyo iPhone nyowani, asi iwe unongozviona chete kana iwe uchiienzanisa neyakakura modhi kana imwe nhare mbozha. Kwandiri, dai ndaizovandudza nhare yangu (a 6s) zvingangodaro zvine musoro kuenda ku8, asi kutaura chokwadi, ndinosarudza kuenda kubva ku6s 128 GB kusvika 6s Plus 256 nekuti mutengo weizvi unenge wakachipa kunyangwe izvozvi izvo zvisere uye angave aine mbiri ndangariro. Mukupedzisira, girazi risingapindike? Yechii? Kutengesa zvisina waya? Izvo zvinongova nyore. Portrait mwenje? Hapana anobata pfungwa dzangu. Yakagadziridzwa kamera? Izvo hazvitore mifananidzo yakanaka mune yakaderera mwenje samsung. Isina mvura? Yakanaka kune avo vanowana yavo nhare kunyorova. Uye nezve iyo nyowani skrini uye yakawedzera chokwadi, hapana chakakosha. Kungofunga zvangu.
9 - Unochengetedza kutenga imwe kavha, ivo vanokushandira zvakafanana.
10 - Unochengetedza kutenga imwe girazi rakadzikama, vanokushandira zvakafanana.
Sezvo kuri kungoisa screen isina mafuremu, kunyangwe iri ips kana chero chingave chinokwana kuitenga, asi ivo vaifanira kutora stock yavakange vasiya, kushambadzira kwakanaka uye kutengesa kune avo vanogona kutora rehash imwechete iyo yatondinetesa.
Ndiri kufunga kutenga iyo X, ndakatengesa yangu iphone 7 kuwedzera 128gb uye ini ndine garaxy s8 + ndichiri kumirira kuti ibude uye ndinogona kuva nayo, nekuti kuti kana zvichizoda kuibata, pakupedzisira shanduko, ndeyekuti kana vachikwanisa kukutengesera nhare ine 16GB yebase inozviita, kunyangwe vamwe vane 128, vanoenderera, hunyanzvi uye vachitarisa kutengesa chigadzirwa chitsva handichichioni, ndinongoona purofiti, ndine zvakawanda masikirini nemakomburu e6 ne7 nekuti tinoaisa pa8. Inokurumidza kupfuura gore rapfuura, murume zvaingoda kunonoka ipapo kare…. asi zvese izvo zvinosanganisa zvave mune mamwe ma terminals kwemakore uye hazvina kuiswa nekuti chero bedzi zvichikwanisa kutengesa zvazvinazvo pasina kuisa mari zvakanyanya uye nekushandura dhizaini uye skrini, zvinotora zvimwe zvakafanana.
Ndakamirira kuona kufananidzwa kwemifananidzo nekuti kamera yakafanana uye ndairidza f1.6 pane s8 + mifananidzo iri pachena, maikorofoni inonditeerera zviri nani, pane iphone 7 plus ndaitofanira kuchema pandaka taura nemunhu mukuru uye muiyo s8 + inonditeerera zvakakwana, mavhidhiyo ane huwandu hwakawanda uye chiratidzo hachina kugurwa mukati memahotera izvo zvinoita kuti ndifunge nezvehunhu hwezvinhu zvacho, uye kunyangwe zvese zvandakamirira tenga iphone X uye ndisiye iyo s8 + nekuti ini ndajaira ios, asi ndinonzwa tsitsi uye ndinonyara kuona zvinoitwa neApple, iyo iPhone X inoita senge kwandiri seyakakura terminal, iyo skrini chaiyo inotora mukana kune zvese zvinogona kuve kunze kwenzvimbo yekamera, vamwe vanogunun'una asi iwe unofanirwa kuvaisa kana ivo vachizoda kudzvanya bhatani uye kuti vabude kubva mukati mefoni, kwandiri zvese skrini yakakwana, yakakwana kumeso, kuti kana zvakakodzera.
Chii chinotariswa neApple Watch Series 3 ine LTE?
IKEA inova yakawanda Apple kupfuura nakare kose